काठमाडौँ महानगरपालिकामा ४३ हजारले लिए भेरोसेल
No Comments on काठमाडौँ महानगरपालिकामा ४३ हजारले लिए भेरोसेल
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा सञ्चालित केन्द्रबाट हालसम्ममा ४३ हजार १८ जनाले कोभिड–१९ विरुद्धको (चिनियाँ खोप) भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लिएका छन् । पहिलो मात्रा दिएकालाई यही जेठ २ गतेदेखि भेररोसेलको दोस्रो मात्रा दिन थालिएको हो ।
यसरी खोप लिनेमा २३ हजार ४८५ पुरुष र १९ हजार ५३३ महिला छन् । यो सङ्ख्या कामपाको वडास्तरीय ३२ वटा खोप केन्द्र र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भएको एउटा गरी ३३ खोप केन्द्रको सङ्ख्या हो । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै वडा नं २६ को खोप केन्द्र लैनचौरबाट दुई हजार ४९२ ले खोप लिएका छन् । वडा १६ को बहुउद्देश्यीय मार्सल आर्ट केन्द्र जुडो हल केन्द्रबाट दुई हजार ४२७ ले र तेस्रोमा वडा नं ३२ बाट दुई हजार ३८५ ले खोप लिएका छन् ।
कामपामा ११ वडामा खोप लिनेको सङ्ख्या एक हजारभन्दा कम रहेको छ । यी वडामा सबैभन्दा थोरै, वडा नं १९ बाट १९७ जनाले, त्यसपछि वडा नं २० मा ३९४ र तेस्रोमा वडा नं २४ मा ४०८ जनाले खोप लिएका छन् । त्यसपछि वडा नं २१, २८, २३, २२, १८, ८, २५ र ३० मा क्रमशः ४१९, ४४२, ४८७, ५२५, ७०६, ७२९, ८१३ र ९०५ रहेका छन् । जेठ ११ गतेसम्म चल्ने खोपमा गत चैत २५ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म पहिलो मात्रा १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अवधिमा हरेक दिन बिहान १०ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म पहिलो मात्रा लगाएको कार्ड लिएर पायक पर्ने खोप केन्द्रमा जानुपर्छ । दोस्रो खोप लगाउन पहिलो खोप लिएको मितिका आधारमा तय गरिएको छ । नागरिकलाई सहजताका लागि सबै वडामा खोप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो डोज जहाँसुकै लगाएको भए पनि दोस्रो डोज भने पायक पर्ने स्थानमा लगाउने व्यवस्था हुँदा नागरिकलाई सहज भएको छ । कामपामा अहिलेसम्म ५४ हजार ५६८ सङ्क्रमितमध्ये १२ हजार ४१ सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् । कोरोनाका कारण ३७२ जनाको मृत्यु भएको छ । बयालीस हजार १५५ जना निको भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
No Comments on श्रीमानको मृ*त्युको भोलिपल्ट छोरी जन्मिएपछि भोक भोकै ३ दिनको सुत्केरी,रुदै आए परिवारनै मिडियामा
घरमा लक्ष्मीको आगमन हुदै थियो त्यसको अघिल्लो दिननै बाबाले सधैको लागि यो संसार छाडेर जानु भयो।कस्तो रैछ दैब पनि जुन गरिबीको रेखामा रहेको परिवारलाइ झन् पिडा थपिएको छ।माया गुरुङ दिदि जो सुकुम्बासी टोलमा बस्दै आएकी छिन्।केहि कमाउने श्रीमान पनि ठुलो रोगले सधैको लागि यो संसार छाडे।
अस्पतालमा औसधि किन्ने पैसा न भएपछि उनको ज्यान गयो,श्रीमानले संसार छाडेको भोलि पल्टनै अर्को सन्तानको आगमन भएको छ।श्रीमानको किरिया बसेकी मायालाइ यो बेला पौष्टिक खाना आवश्यक छ तर घरमा एक किलो चामल समेत रहेनछ।उनको अबस्था देखेर सबैको आँखा रसायो।सोहि क्रममा आएको सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छौ कृपया सहयोग गर्नुहोला भिडियो हेरेर :
No Comments on आफ्नो श्रीमानसँग लागेको भन्दै आरोप लगाएपछि सडक मै पर्यो कु टा कु ट, सासुले बुहारीलाई घर बाट निकालिदिन (भिडियो सहित)
झापा । अहिले नेपालमा श्रीमान श्रीमती बीचका धेरै घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । झापाको दमकमा २ जना युवतीको झ ग डा भएको छ । पिडित युवतीले मलाई बिभिन्न आ रो प ल गाएर मेरो घरमा सुनाई दिएपछि घरबाट सासुले निकालेको बताएकी छिन ।
घर बनाउने लेभर काम गर्दै आएकी युवतीलाइ घर बाट निकालेपछि दुख ब्यक्त गर्दै न्याय खोजिरहेकी छिन । आफु कुनै केटा संग नलागेको तर मेरो सासु आमालाई झापा दमककै एक युवतीले आफ्नो श्रीमान संग लागेको र अन्य संग पनि सम्बन्ध छ भन्दै आ रो प ल गा एपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
सत्य कुरा के के हो भनेर बुज्न आफ्ना माइती सम्म आएका थिए । आरोपित युवतीको घरमा जाँदा एकअर्का बीच हा त हा ला हा ल भएको हो । आखीर के हो सत्य कुरा चाहि ? तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।
यि हुन् डिभोर्सपछि एक्लै रमाइरहेका १० महिला कलाकार (हेर्नुहोस)
No Comments on यि हुन् डिभोर्सपछि एक्लै रमाइरहेका १० महिला कलाकार (हेर्नुहोस)
जिन्दगीभर संगसंगै दुखसुख बाड्ने संगसंगै खुशी हुने बाचा सहित बिबाह बन्धनमा बाधिएपनी कतिपयको पारिवारीक जीवन जिउने क्रममा आपसी मतभेद हुन जान्छ। पारिवारमा सानोतिनो मतभेद नहुने त को नै होलार तर कतिपय मतभेद बढ्दै जाँदा सम्बन्ध नै पुर्ण बिराम लाग्नसक्छ ।
अहिले बढ्दै गएको ग्लोबलाईजेसनले झनै यस्तो समस्याहरु दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको छ । संगै मर्ने संगै बाच्ने कसम खाएर वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका थुप्रै जोडीको दाम्पत्य जीवन यात्रा सफल भएको बिच बाटोमा नै टुंगिएको छ । यस्ता घटना बढ्नुका मुख्य कारण अविश्वास, आशंका र महत्वकांक्षा नै हो । जसले धेरैको जिन्दगीमा उतारचढाव ल्याउने गरेको छ कतिलाई त सम्बन्धको ईन्डिङ गर्नुपर्ने अबस्था आइपरेको छ ।
यसो त नेपाली कला क्षेत्रपनि यसबाट अलग भने हुन सकेको छैन । धेरै कलाकारहरुले आफ्नो सम्बन्धलाई टुङ्याएर डिभोर्स गर्नुपरेको छ । कतिपयले दोश्रो बिबाह गरिसकेका छन् । डिभोर्स गरेर दोस्रो विवाह गर्ने कलाकारहरुमा संचिता लुइटेल, पूजा चन्द, सिम्पल खनाल, प्रियकां कार्की , झरना बज्रचार्यलगायत छन् । सुस्मिता बमजन, प्राश्ना शाक्य, प्रिया रिजाल, रेश्मा सुनुवार, पुजना लामा, सिरु बिष्ट, सुस्मिता कार्की, सिर्जना बस्नेत डिभोर्स गर्ने कलाकारको सूचीमा पर्छन् ।
एउटा दाम्पत्य सम्बन्ध सफल भएपनी कतिपयले अर्कोसंग घरजम गर्ने तयारी गर्छन् । भने कतिपयले डिभोर्सपछि एक्लै जिन्दगी चलाइरहेकाहरु पनि छन् । आज हामी केही महिला कलाकारबारे चर्चा गर्दैछाै जो डिभोर्सपछि पनि एक्लै जीवन हाँकिरहेका छन् । यानिकी एक्लो जिवनमा पनि रमाईरहेका छन् ।
१. रेखा थापा-
नेपाली चलचित्र जगतमा एकपटक राज गरेकी नायिका हुन् रेखा थापा । रेखा हिम्मतवाली नायिकाका रुपमा पनि परिचित छिन् । फिल्मभित्र नायकलाई ओझेल पार्दै उनी नै नायकका रुपमा उभिन्छिन् । कतिपय फिल्ममा त उनको नै मुख्य भुमिका रहेको पाईन्छ । निर्देशक छवि ओजासंग विवाह गरेकी थापाको वैवाहिक सम्बन्ध लामो समयसम्म भने टिक्न सकेन् । एक दशक लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई ब्रेक लगाएकी रेखा हाल एक्लै बसीरहेकी छिन् ।
२. रिमा बिस्वकर्मा-
स्मार्ट, सुन्दरी देखिने नायिका तथा मोडल रिमा विश्वकर्माको फिल्मी यात्राले खासै धेरै सफलता पाउन सकेन । उनले रोबर्ट बिकसंग विवाह गरेकी थिइन् । विवाह गरेको २ वर्ष नपुग्दै नै उनीहरुले आफ्नो सम्बन्धलाई पूर्णविराम लगाए । नेपाल आइडलको पहिलो र दोस्रो सिजनमा होस्ट बनेपछि लोकप्रियता अझ तुल्याउन सफल रिमा प्रस्ट वक्ताका कारण चर्चामा रहन्छिन् । उनी अहिले कमेडी च्याम्पियनको होस्ट गरिरहेकी छिन् ।
३. मनिषा कोईराला-
बलिउडमा समेत नम्बर १ नायिकाको स्थान हासिल गर्न सफल भएकी नायिका हुन् मनिषा कोइराला । उनले फेरि भेटउँलाबाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरेकी थिईन तर नेपाली फिल्ममा भन्दा बलिउडमा बढी सफलता हात पारिन् । बलिउडमा उनी फिल्मबाट नै रातारात स्टार बनिन् । उनै मनिषाले बिजनेस म्यान सम्राट दाहालसंग विवाह गरेकी थिइन् । तर उनीहरूको सम्बन्ध टिक्न सकेन । अहिले मनिषा एक्लो जिवनमा रमाईरहेकी छिन् ।
४. मिलन अमात्य-
दर्जनौ गीतमा आफ्नो स्वर दिएकी नयाँ पुस्तामा चिरपरिचित गायिका हुन् मिलन अमात्य । उनको धेरै गीतहरु हिट बनी बने । सफल गायिका अमात्यको वैवाहिक जीवन भने सफल हुन् सकेन् । विवाह भएको ६ वर्षमा मिलन र उनको श्रीमानबीच डिभोर्स भएको थियो ।
५. मौसमी मल्ल-
कुनै समयकी चर्चित नायिका हुन् मौसमी मल्ल । १५ वर्षको सानो उमेरमा नै बिबाह गरेकी उनको विवाह भएको ९ वर्षपछि डिभोर्स भएको थियो । मौसमी मल्लले धन विक्रम मल्लसंग विवाह गरेकी थिइन् । आफ्नो बैबाहिक जिवन ध्वस्त भएको सम्झेर पुन विवाह गर्नेबारे कल्पना पनि नगरेको उनले बताउने गरेकी छिन् ।
६. अरुणिमा लम्साल-
कुनै समयकी निकै चर्चित नायिका हुन् अरुणिमा लम्साल । उनको पनि वैवाहिक सम्बन्ध धेरै समय टिक्न सकेन । अमित अर्यालसंग विवाह गरेकी उनको १२ वर्षपछि वैवाहिक सम्बन्ध टुङ्ग्याएको थियो । अहिले उनी एक्लो जिवनमा रमाईरहेकी छिन् ।
७. गौरी मल्ल-
नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा सदाबहार देखिएकी नायिका हुन् गौरी मल्ल । कुनै समयकी चर्चित नायिका अहिले विभिन्न भुमिका निर्बाह गर्दै आएकी छिन् । करियरकै उचाइमा रहेका बेला उनले प्रज्वल भण्डारीसंग विवाह गरेकी थिइन् । प्रज्वलसंग वैवाहिक सम्बन्ध नटिकेपछि उनीहरु अलग्गिए । गौरीले अहिलेसम्म एक्लै बस्दै आएकी छिन् ।
८. रन्जना शर्मा-
निर्देशक श्याम भट्टराई संग बिबाह गरेकी रन्जना शर्मा बिबाह पश्चात अमेरिका पलायन भैइन । उनी अहिले पनि अमेरिकामा नै बस्छिन् । विवाहपछि अमेरिका पुगेपछि उनीहरु टाढा हुँदै गए अन्तत उनीहरु अलग्गिन बाध्य भए ।
९. चुल्ठिम डोल्मा-
चुल्ठिम डोल्मा चलचित्र नोभेम्बर रेनबाट चर्चामा आएकी हुन् । चर्चामा आएसंगै गायक धिरज राईसंग विवाह गरेकी उनको बैवाहिक सम्बन्धपनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । अहिले पनि उनी एक्लै बसिरहेकी छिन् । तर उनीहरु के कारणले अलग भए भन्नेकुरा खुलाइएको छैन ।
१०. सुस्मिता के.सी.
सुस्मिता के.सी.को बिबाह चर्चित अभिनेता भुवन के.सी.संग भएको थियो । लभ म्यारिज गरेको यो जोडिले धेरै लामो समय सम्म सम्बन्ध टिकाउन सकेन । अन्तत यो जोडी अलग्गिएर बसे । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा महँगो अभिनेताको छवि बनएका अनमोल के.सी. उनिहरुकै सन्तान हुन् ।
भुन्टी सिरियलको ‘मुकुली’ले २३ जना छोराछोरीहरु बोकेर घर छोडिन् । आँशु झरे, नयाँ घरमा बच्चाहरु दँग (भिडियो हेर्नुस)
कठै ! मम्मी रोपाई सकेर आउछु है भनेर माईत बाट घर फर्केको ३ घण्टा नबित्दै घरबाट आएको मृत्युको खबरले सबैलाई अचम्म बनायो
आखिर अनितालाई आफै यसरि उठ्न सक्ने बनाएरै छोडे भगवान् जस्ता श्रिमान बिनोदले , आफै गर्छिन अनिताले यस्ता काम